China Carbon vy nanapaka tariby orinasa sy ny mpanamboatra | TAA
Manome tariby tapaka vy izahay avy amin'ny tariby vy vaovao sy tariby kodiarana taloha.
Ny fitazonana ny fiainana reraka ambony noho ny tanjaka ambony, mampihena ny vidin'ny fanjifana.
Tsara boribory faribolana, haben'ny fanamiana, tsy tapaka mandritra ny fampiasana, kalitaon'ny tifitra avo lenta.
Ny vidiny lafo indrindra raha ampiasaina amin'ny famonoana ny faritra medchnical miaraka amina hamafin'ny HRC40-50.
Nanao fanatsarana lehibe tamin'ny fitaovana sy ny teknika izahay tamin'ny alàlan'ny dingan'ny famokarana nentim-paharazana.
Fampiasana tariby vy misy alim-borona avo lenta ho toy ny substrate izay mampiakatra avo kokoa ny fananana mekanika ary mampiorina azy io.
Fanatsarana ny asa-tànana misy tariby izay mahatonga ny fandaminana anatiny ho matevina kokoa.
Fanatsarana ny fizotran'ny passivation nentim-paharazana izay miankina tanteraka amin'ny fiatraikany hampihena ny fahasimbana mandritra ny fipoahana, manatsara ny fiainam-panompoana.
Ny lanjan'ny singa
Ny habe lehibe azontsika omena: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm.
Teo aloha: Masinina fipoahana voatifitra karazana amponga
Manaraka: Tifitra vy notapahana vy
Carbon Steel Cut Wire Abrasive
Notifirina Wire Carbon Steel Cut Wire
Haino aman-jery Cut Wire Shot Blast Media
Fanapahana tifitra tariby tariby
Tapaho ny tifitra fitifirana tariby
Haino aman-jery Cut Wire Shot Peening
Hetezo fanapahana habe
Voapaika vy tifitra vy
Voatifitra Tapaka Wire Shot
Steel Cut Wire Ho an'ny Peening
Voatifitra tamin'ny vy notapahana ho an'ny paozy voatifitra
Hatraiza azo zahana: GP: HRC46-50 Vokatra vao vita amin'ny zoro, ny grit dia boribory tsikelikely amin'ny fampiasana ary mifanaraka indrindra amin'ny fitsaboana alika amin'ny hoditra oxide. GL: HRC56-60 Sarotra noho ny grit vy GP, very koa ny sisiny maranitra mandritra ny fandrahoana basy ary mifanaraka indrindra amin'ny fampiharana fanomanana ambony. GH: HRC63-65 Hardness avo, maranitra sisiny mijanona mandritra ny fiasan'ny, ampiasaina indrindra amin'ny rivotra voafintina nitifitra fipoahana equipm ...
Ny fitifirana vy tsy misy vy dia be mpampiasa amin'ny fitifirana / fanapoahana rivotra isan-karazany amin'ny fanariana vy tsy ferrous, vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, kojakoja vita amin'ny aliminioma, fitaovana enti-miasa, vato voajanahary, sns. , Matt famitana ny vokatry ny fitsaboana ambonin'ny tany. Miaraka amin'ny fitaovana manta vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny tifitra vy tsy misy fangarony dia asongadin'ny poti sy fanamafisana, izay miantoka ny fiainany maharitra sy tsara ...